Realme Oo Ku Dhawaaqday 64 MP Quad Camera Smartphone Ah | Androidsis
Realme waa kii ugu horreeyay ee 64MP aaladda casriga ah ee la yimaada kamarad gadaal afar geesle ah
Realme waxay ku leedahay firfircooni badan suuqa dhawr bilood, oo ay waddo, qayb weyn, masuuliyadda dusha ka saartay maaddaama ay dhowaan caalamiyeyn ka dhigtay. Waana taas shirkad si buuxda u gashay Shiinaha y waxay leedahay hadafkeeda xiga Yurub oo dhan Ma awoodi kartid inaad haysatid nooc yar oo taleefannada casriga ah. Taasi waa sababta ay u qorsheyneyso furitaanka laba terminaal cusub, kuwaas oo ah Realme 5 y 5 Pro, iyo mid leh 64 megapixel camera.
Qeybta dambe wali ma lahan magac ganacsi, laakiin waa la soo bandhigi doonaa dhowaan, sida soo saaruhu dhowaan shaaca uga qaaday eQalabka kiciya ee la soo sheegay ayaa lagu dhejin doonaa qayb sawir dambe ah iyo saddex dareemayaal kale ah.
Munaasabad ay shirkaddu qabatay maanta, imaatinka soo socda ee qalabka leh Samsung ISOCELL Bright GW1 kamarad leh 64 megapixel resolution. Intaas waxaa sii dheer, waxaa lagu dhawaaqay in kicintaani ay ku yaali doonto nidaam kamarad laba jibbaaran, sidaan horeyba u aragnay. Terminalkani wuxuu noqon doonaa mid si toos ah loola tartamo Xiaomi ee soo socota iyo tan ugu horreysa 64MP aaladda casriga ah, kaas oo ku jira qorshayaasha shirkadda.
Kalsoonida 64 MP waxay noqon doontaa soo jiidashada ugu weyn, halka saddexda kamaradood ee kale ay ka kooban yihiin muraayad aad u ballaadhan oo ballaadhan, macro, iyo dareemayaal qoto dheer. Dhinaca kale, sida kamaradda sawir-qaadaha, weli wax macluumaad ah ma jiraan, laakiin tani ma noqon doonto midka soo jiito dareenka ugu badan, hubaal.
Realme 5 waxay ku qaadataa safar Geekbench ah Snapdragon 665
Madaxa Realme India Madhav Sheth ayaa sidaas xaqiijiyay Shirkadda ayaa soo bandhigi doonta seddex kamaradood oo taleefannada casriga ah ka hor Diwali (oo ah xaflad 5 maalmood Hindu ah) sanadkan. Saddexdaan taleefan ee casriga ah waxaa lagu soo bandhigi doonaa hoosta Realme, Realme Pro iyo Realme X. Sheth ayaa sidoo kale qoday Xiaomi waxayna sheegtay in Realme ay bixineyso waayo-aragnimadii ugu horreysay ee adduunka ee la adeegsado halkii ay ka muuqan laheyd slideshow.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Realme waa kii ugu horreeyay ee 64MP aaladda casriga ah ee la yimaada kamarad gadaal afar geesle ah
Teclast T30, kiniin cusub oo leh 8000 mAh baytariga iyo Helio P70 SoC oo ka socda Mediatek
Trópico waxaa lagu sii deyn doonaa Android 5-ta Sebtember